Tigist Tufaa maratoonii Landan moo'atte - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Ispoortii Atleetiksii Tigist Tufaa maratoonii Landan moo’atte
Tirfii Tsaggaayee 3ffaa taateti kan xumurte
Maratoonii Landan kaleessa geggeefameen Tigist Tufaa injifannoo boonsaa galmeessisuu dandeetteerti. Tigist fiigicha kan injifannoon kan xumurte sa’aa 02:23:22n. Tigist maratoonii Landan injifachuudhaan abdii Meerii Ke’itaanii Keeniyaa si’a 3ffaaf wolitti aansitee injifachuu jalaa jaamsiteerti. Injifannoon Tigist, Meeriin 2ffaa irratti akka haftuuf dirqeera.
‘Qilleensi baay’ee rakkisaa ture. Ta’us dhumarrati injifachuu danda’eera. Aabjuun koo yeroo dheeraa maratoonii Landan moo’achuu ture. Aabjuun koo dhugaa ta’eera. Hangam akka gammade dubbachuu narakkisa,’ jette Tigist Tufaa yaada isii miidiyaaf yeroo laattu.
Tigist maratoonii Landan yeroo jalqabaaf kan injifatte. Garuu maratoonii Shaanghaay bara 2014 kan moo’ate isii ture.
Maratoonii dubartootaan 3ffaa taatee kan xumurte Tirfii Tsaggaayee turte.
Maratoonii Landan kan bara 2015 isa worra dhiiraa guutummatti kan dhuunfatan atleetota Keeniyaa turan. Maratoonicha kan injifate Eluud Kipchoogeedha. Kipchoogeen sa’aa 02:04:23 xumure.
maratoonii landan 2015
Previous articleUN HRs: Continued detention of Ethiopian journalists unacceptable
Next articleAl Jazeera: If Ethiopia is so vibrant, why are young people leaving?